Xukuumadda Feedaraalka iyo Gobollada Sool iyo Sanaag | allsanaag
Xukuumadda Feedaraalka iyo Gobollada Sool iyo Sanaag
Xukuumadda Feedaraalka iyo Gobollada Sool iyo Sanaag. Qore: Maxamuud Geeldoon
Maalmahan waxaa soo badanaayey guux ku saabsan xodxodasho siyaasadeed oo ay Xukuumadda Farmaajo ka dhex waddo bulshooyinka ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag. Waa wax jira in Dawladda sharciga ah ee Soomaaliya uu shacabka Soomaaliyeed oo dhan xil ka wada saaranyahay, ayna xaq iyo waajibba u leedahay inay dadkeeda toos ula xidhiidho. Saasoo ay tahay, ayaa haddana waxaa madaxayga ku wareegaya arrimahan aan halkan idiinku soo bandhigayo:
1- Xukuumadda Farmaajo, iyo Xukuumadihii ka horreyey toonni, marna may diidin sheegashada ay Soomlilaand sheegato inay intii iksu ahayd Maxmiyadii Ingiriiska ay iyadu sharci ahaan qareen u wada tahay.
2- Xukuumadda Farmaajo iyo Xukuumadihii ka horreeyey toonni marna ma aqoonsan kaalintay wadahadallada dhexmara Soomaaliya iyo Soomaalilaand ku leeyihiin shucuubta Soomaaliyeed een kalago’a rabin haddana aayohooda laga wada hadlayo.
3- Madaxweyne Farmaajo wuxuu hore u diidey inuu xadkii ay Ingiriis iyo Talyaani kala dhigteen dhinaciisa ay Soomaalilaand sheegato u soo tallaabo, taasoo uu macaneheedu yahay inuu u aqoonsanyahay dhul ay Soomaalilaand xukunto.
4- Ka hor intaanay Puntlaand cudud isla hortaagin hawlgallada melleteri ee ay Soomaalilaand rabto inay ku qabsato xuduuddii Ingiriis iyo Talyaani kala dhigteen, Xukuumadda Farmaajo uma muuqaneyn mid dan kale gobollada Sool iyo Sanaag.
5- Maxaa awood ah ooy Xukuumadda Farmaajo haysaa ama ku soo darsanaysaa halganka ay shucuubta gobollada Sool iyo Sanaag ugu jiraan inaan xuduuddii ay Ingiriis iyo Talyaani kala dhigteen noqon meel Soomaaliya laga kala gooyo, kalagoynta Soomaaliyana aanay noqon arrin hirgalay oon wax laga qaban karin (“fait accompli,” ama “أَمْر واقِع”)?
Ugu dambayn, waxaan kula talinyaa shucuubta gobollada Sool iyo Sanaag een goosashada rabin, dhulka la rabo in dalka laga kala gooyona deggani, ay u fiira yeeshaan ujeeddooyinka ay Xukuumadda Farmaajo ka leedahay siyaasaddeedan cusub ee ku aaddan degaannadooda, una dhug lahaadan maahmaahda Soomaaliyeed ee tiraahda NIMAAN KUU FURI DOONINI YAANU KUU RARIN.
← Qabyaaladdii SNM oo la doonayo in Itoobiya loo rarao Cabdul qaadir Biriir iyo Shirka wada tashiga →